रेडियो ताप्लेजुङ वैकल्पिक शक्ति निर्माण भनेको पार्टी फुटाउनु हो ? के भन्छिन् रञ्जु दर्शना ?
पुस २९ गते । आन्तरिक विवादका कारण अन्ततः विवेकशील साझा पार्टी फुटेको छ । पार्टीका एक संयोजक उज्ज्वल थापालगायतले नयाँ दल दर्ताका लागि आज निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार निवेदनमा नयाँ पार्टीको नाम विवेकशील नेपाली दल प्रस्ताव गरिएको छ ।
हामीलाई पनि यस्तै लाग्छ । त्यतिखेर हामी फुट्नका लागि जुटेका थिएनौँ । हाम्रा पाइलाहरुमा विद्यमान समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि समस्यालाई स्वीकार नै गर्न नसकिएपछि के लाग्छ र रु समस्यासँग जुध्न नचाहने ‘नेचर’ ले नै समस्या निम्त्याएको हो ।
यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो प्रश्नको जवाफ समयले बताउँछ । हामी दुवै दलले गर्ने अबका कार्यक्रमहरुले कुन शक्ति वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने प्रष्ट पार्नेछ ।-उज्यालो